GoodBye Pokemon Go၊ မင်္ဂလာပါ Root | Androidsis
GoodBye Pokemon Go, မင်္ဂလာပါ Root
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, Android application များ, NOTICIAS, ပိုကီမွန် Go ကို
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ကိုငါခေါင်းစဉ်ချင်သော GoodBye Pokemon Go, မင်္ဂလာပါ Rootကျွန်ုပ်သည် Nintendo ၏လှည့်စားသောပြorနာသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းပြောလိုသည်။ အမြစ်တွယ်နေသော Android terminal နှင့်သို့မဟုတ် jailbroken iOS device နှင့်အသုံးပြုသူများအားလုံးကိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်ရန်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖောင်းပွမှုနှင့်ဂယက်ရိုက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည့်ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းဖြစ်သည့်အရာများကိုဖန်တီးသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ယခုနှစ်လကျော်မျှနေထိုင်ပြီးနောက်မည်သူမျှမမှတ်မိတော့ပါ သူ့ကိုတော့သူအလွန်များများစားစားရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့လမ်းမများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့အကြိုက်ဆုံး Pokemon ကိုအမဲလိုက်ဖမ်းယူခြင်းများမတွေ့ရတော့ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒီနွေရာသီမှာဒီဂိမ်းကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့သူအားလုံးဘာဖြစ်သွားသလဲ။ အနည်းဆုံး Android ဂိမ်းကစားသူတွေအတွက် Android trainer လို့ခေါ်တဲ့အရာတော်တော်များများကဒီဂိမ်းကိုဘေးဖယ်ထားပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှန်ပါတယ်။ root user ဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ ဒီအန်ဒီအသုံးပြုသူများအားကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များအားလုံးခံစားရန် ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို Pokemon game ကိုပျော်မွေ့ဖို့အတွက်အရှုံးမပေးချင်ဘူး။ ငါတို့ဘာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သွား၊ ဂိမ်းထဲမှာ cheat နေဆဲရှိပါတယ် အိမ်သို့မထွက်ဘဲ Pokemon Go ကိုအလိုအလျောက်ကစားနိုင်စေရန်အလိုအလျောက်ဖိနပ်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်များမှတဆင့်ဖြစ်စေ။
တကယ်တော့ Nintendo နဲ့ Niantic တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောင်နားလည်နိုင်ပါတယ် iOS ကိုအသုံးပြုပါက jailbreak ပါ ၀ င်သော user များသို့မဟုတ် terminal မ်ားအား root ဂိမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်သည် ဂိမ်းမှ cheat များကိုပိတ်ပင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ကံမကောင်းသို့မဟုတ်ကောင်းစွာမသိလောက်သောကံမကောင်းဖြစ်သည့် iOS ဖြစ်လျှင်၎င်းမှာရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရနိုင်သော်လည်းခရက်ဒစ်များကိုရှောင်နိုင်သော်လည်း Android ကိစ္စတွင်၎င်းသည်မည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိခဲ့ပါ။
Nintendo သည် Root terminals နှင့် Android သုံးစွဲသူများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Jailbreak ပါ ၀ င်သော terminal သည်အခမဲ့ပေးရသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်တရားမဝင်လှည့်ကွက်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ Nintendo ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်မန်နေဂျာများမည်သို့ဖြစ်သွားသည်၊ အခကြေးငွေပေးထားသော application များကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်အတွက် rooted terminal တစ်ခုမလိုအပ်ပါ သို့မဟုတ်တူသောကွဲပြားခြားနားသောလှည့်ကွက်လုပ်ဆောင်ပါ အိမ်ကနေမထွက်ဘဲ Pokemon Go ကိုကစားပါ.
root user ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် rooted terminal တစ်ခုရှိခြင်းသည် Nintendo ၏စိတ်ကူးများထက်များစွာပိုသည်။ ထုတ်လုပ်သူများဘေးဖယ်ထားသည့်တိုင် Root terminal ရှိခြင်းကအကောင်းဆုံးသောအသုံးအနှုန်းကိုခံစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုသည်။ Root ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ပရိုဆက်ဆာကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ Root ဖြင့်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Root နှင့်မူကွဲအသစ်များကိုမွမ်းမံသောအခါ Android ကိုမွမ်းမံနိုင်သည်။ ၏ Android မရှိတော့ပါ။ သင်အမှန်တကယ် Nintendo သူငယ်ချင်းများက Pokemon Go ကိုကစားရန် Root ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်မည်ဟုသင်ထင်သလား။.
ဒါကြောင့်မို့လို့ Nintendo ရဲ့မာနထောင်လွှားမှု၊ ငါဘာလို့မသိဘူးလို့ငါထင်တာလဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ၊ အမြစ်တွယ်နေသော terminal မှ Pokemon Go ကိုဖွင့်နိုင်သည်အမြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်လှည့်ကွက်များ၊ Nintendo နှင့် Niantic တို့မှဤအရာကိုပြောပြခြင်းဖြင့် Pokemon Go ကိုမကစားတော့ပါဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်၊ GoodBye Pokemon Go, မင်္ဂလာပါ Root.
ဒါဟာသင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပေမဲ့အဲဒီမှာ Pokemon Go ရှိတယ် Android ကို Root မသုံးပဲ root ကိုဖျောက်ထားရန် terminal ကို flash လုပ်ဖို့အခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာမထိုက်တန်ပါဘူး။ တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ GoodBye Pokemon Go, မင်္ဂလာပါ Root.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » GoodBye Pokemon Go, မင်္ဂလာပါ Root
YαтøAитяαχ20XX⛔ (@ YatoAntrax20XX) ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့အရာရာတိုင်းဟာ Niantic ပါ။ Nintendic ဆိုတာ Nintendic မဟုတ်ပါ။ နှုတ်ဆက်ခြင်း
YαтøAитяαχ20XX⛔ (@ YatoAntrax20XX) သို့စာပြန်ပါ
Ramzz Ramzz ဟုသူကပြောသည်
Ramzz Ramzz သို့ပြန်သွားပါ
Carlos Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
😀ပြက်လုံးမရှိဘူး၊ အားသာချက်တွေကိုရှောင်ဖို့အတွက်သင်လုပ်တာကောင်းတာမြင်တယ်။ သူတို့ဟာလူတိုင်းအတွက်မမျှတဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ။
အကြောင်းရင်းကတော့ Root အသုံးပြုသူများကိုတားမြစ်ခြင်းသည် cheaters ဂိမ်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါကဒီသူငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ပြtheနာပါ။
Mauro Vega - အာဂျင်တီးနား ဟုသူကပြောသည်
မင်းကိုလိမ်တာငါငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုတာငါနားလည်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလိမ်တယ်၊ ဂိမ်းမကစားဘူး MY ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးနေသော Pokemon ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ငါပျော်နေတုန်းပဲ။ ငါတခြားလူတွေလုပ်တာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါအားကစားခန်းမမှာ ၀ တ်ထားတဲ့အင်္ကျီတွေထုတ်လိုက်ရင်ကော။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဂိမ်းကို လိုက်၍ အခြားတစ်ခုကိုဝင်ရန်ကြိုးစားမည်။
Mauro Vega - Argentina မှစာပြန်ရန်
ပိုကီမွန် Go ဆိုတာဘာလဲ။ သင်ဘယ်အကြောင်းပြောနေတာလဲ? (Root user)
SkyNet801 (Jorge C. ) (@ SkyNet801) ဟုသူကပြောသည်
ငါ၎င်းကိုဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသူတို့ကငါ့ကို Root ဖြစ်ခြင်း ... Root ဖြစ်ခြင်းမှငါ့ကိုတားဆီးကြောင်းသိမြင်လျှင်အဖြစ်က uninstall လုပ်ခဲ့တယ်, သင်က IO များ၏ဖြစ်ရပ်နိုင်သကဲ့သို့, TERMINAL HACKED ... မဟုတ်ပါဘူး ... ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows တွင်စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်ထူးများရှိကြပြီး developer မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ admin ဖြစ်လျှင်ဂိမ်းဖိုင်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးပြုပြင်မွမ်းမံလျှင်၎င်းသို့မဟုတ်ထိုဂိမ်းကိုမကစားနိူင်ပါ။ PC အတွက် PunkNuster သို့မဟုတ်အလားတူစနစ်များသည်ဂိမ်းများကသင့်ကိုထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုကြောင်းပေါ်ထွက်လာသည်။ သို့သော်မည်သူမျှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခွင့်ထူးများအသုံးပြုသူများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်းကိုတောင်မကြုံတွေ့ရပါ (ကျွန်ုပ်ထပ်တလဲလဲပြောရလျှင် Windows တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောပရိုဖိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ငါတို့အားလုံး ... )
ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အချက်မှာ Niantic သည် Google ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Root အသုံးပြုသူများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Google Technicians များထက်အတွေ့အကြုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောအသံများထက် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းသည် (Nokicic က Google ကို Pokemon Go မတိုင်မီကထုတ်ဝေကတည်းက Google ကိုဝယ်ခဲ့သည်) ) Ingress ကိုခေါ်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ပကချမှတ်ခဲ့ပြီး Nintendo ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရင် Root ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုသဘောမကျဘူး။
နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရရင် root ဆိုတာဖုန်းကို "hacked" မထားဘူး၊ "hacked" လား၊
SkyNet801 (Jorge C. ) သို့ပြန်သွားရန် (@ SkyNet801)
ငါအသုံးမကျတဲ့ Niantic ပရိုဂရမ်မာတွေအားလုံးကို SUPERCELL မှာခိုးကူးတာကိုဘယ်လိုတားဆီးရမလဲလို့မေးဖို့အကြံပေးတယ်။ Clans clans များတွင် third-party app များကို root ဖြစ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
ကစားသမားတွေကိုကစားနိုင်အောင်ကစားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် cheat တွေမဟုတ်ဘူး။ ပရိုဂရမ်ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာသိရုံပဲ။
ငါထင်တာကတော့ Niantic (သို့) Nintendo, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှဒီတစ်ကြိမ်မှားယွင်းနေသည်…။ ဂိမ်းသည်သုံးစွဲသူများ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင်၎င်းကိုရှင်းလင်းပြီးအထီးကျန်ဆန်စွာမထားခဲ့သင့်ပါ။ ထို့အပြင်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဂိမ်းတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောအချိန်ဟုမည်သူပြောနိုင်သနည်း၊ သူတို့အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကန့်သတ်ထားသောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ဖော်ထုတ်လျှင်မည်သူမျှညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကစားနိုင်လိမ့်မည်။ အိမ်မှလုံခြုံစွာကစားနိုင်ခြင်းအတွက်ထိုရွေးချယ်စရာများကိုတီထွင်ပါ။ ထိုရွေးချယ်စရာများကိုဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါက၊ ထိုအားသာချက်များကိုရယူရန်ဆန္ဒရှိသူများအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ထိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်မည်သူနည်း။ မည်သူရှုံးသနည်း။ Niantec မှာဒီလိုတံခါးပိတ်ထားခြင်းဟာရှက်စရာကောင်းတယ်။
NBA 2K17 ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်